Noloshii Warmooge iyo la kulankii Eeebbe – Kaasho Maanka
Waxaa mudo dhowr bilood ahi ay ka soo wareegtay burburkii dawladii dhexe. Warfaa iyo qoyskiisuna waxaa ay u qaxeen meel baadiye ah oo 50 km dhanka qorraxdhaca ka xigta magaaladii ay ku noolaayeen. Nolosha qoysku waxaa ay ku tiirsan tahay xayn adhi ah iyo beer yar oo xoogay qudaar ah ay ku beereen. Waa habeenimo Isniin ah, qoysku waxaa uu ku hareeraysan yahay dab ay ku shiteen aqalka hortiisa. Dabka waxaa saaran dhari ay walaaqayso Canbara oo xaaska Warfaa ah. Warfaana waxaa uu sheekoxariiro u tebinayaa afar caruur ah oo uu dhalay laba hablood iyo laba wiil. Cabaar dabadeed waxaa reerkii afka iska soo taagay col hub ku jeeni qaaran. Mid colkii ka mid ah ayaa yidhi, “Waa isagii waa Warfaa Samakaab.” Dabadeedna markii uu eraygii u danbeeyay afkiisa ka soo baxay, ayaa colkii rasaas oodda kaga qaaday qoyskii, waxaana ay rasaastii haleeshay Warfaa iyo laba caruurtii oo ay dishay iyo Canbaro oo ay lafdhabarka jebisay. Colku wuxuu ahaa qabiil ay colaadi dhex taalo qabiilka Warfaa, ha yeeshee Warfaa laf ahaantiisu aanu wax ba ka galabsan.
Waxaa sanad laga joogaa habeenkii mashaqadu dhacday ee Warfaa iyo laba caruurtiisa ka mid ah si arxan daro ah loo dilay, hooyadii qoyskana naafanimo looga tegay. Warmooge oo curadka qoyska ah gu’gan na afar iyo toban jirsaday ayaa qoyska u ciidan ah. Canbaro mudo sanad ahba aqalka kama aysan dhex kicin, saxaradda waa laga qaadaa cuntada afka ayaa loogu guraa. Qoysku waa uu tabaalaysan yahay oo duruufo badan oo caydhnimo iyo curyaanimada hooyada qoyska ayaa isu raacay. Intaa waxaa dheer in nabarkii Canbaro dabshidkii hore gaadhay aanu bogsan oo uu caabuqay. Habeenkii kaarkiisa kama ledo, dharaartiina oomatida kama cuni karto. Canbaro nabarkeedii waxaa uu sababay in Kansar ku dhaco mudo sanad ah dabadeedna waxaa ay dhimatay iyada oo jidhkeedii marba cad soo ruqay. Waxaa ay dhimatay iyada oo caafimaad iyo gargaar ka dalbanaysa ilaaha wax daaweeya ee naxariista badan.
Warmooge iyo walaashiis, Ceebla, maadaama ay agoon iyo rajo noqdeen waxaa ay magan u noqdeen habaryartood oo iyadu na ku nool duruuf adag oo la mid ah tii ay reer Warfaa ku noolaayeen. Labadii gu’ ee u danbeeyay dhibic biyo ahi cirka kama ay soo dhicin; duunyadii waa ay madhatay oo reeraha neef uma soo xeroodo, dadku waxaa ay la ildaran yihiin gaajo iyo oon. Macaluul daran ayaa ka dilaacday degaanka, macaluushaasi waxaa ay galaafatay ciroole iyo caruur ay ka mid tahay Caabla. Ceebla waxaa ay dhimatay iyadoo beerka iyo boggu isku dhegeen afku na qalalan yahay. Waxaa ay dhimatay iyadoo gacmaha kor u taagaysa oo naxariis ka tuugaysa ilaaha caadilka ah ee wax irsaaqa.
Warmooge waxaa uu miciin biday tuulo 20 km u jirtay deegaankii reeruhu yaalleen. Waxaa uu rarka ka dejiyaa baabuurta tuulada raashinka, sibidhka iyo bagaashka keenta. Mudo dabadeed waxaa tuuladii ku habsaday koox diimeed xagjir ah. Waxaa ay tuuladii ku soo rogeen xukun aad u qalafsan oo cidii jebisaa ay ciqaab daran la kulmayso. Warmooge iyo dhowr dhalinyaro ah waxaa ay rejo ka qabaan dawlad dhexe oo dalka ka dhalata waxaana ay taageeraan dawlad ku meelgaadh ah oo sanadkii hore la dhisay. Kooxdii tuulada haysatay waxaa ay ka war heshay arinka Warmooge iyo asxaabtiisa. Dhowr jeer kolkii xabsi iyo ciqaab jirdil ah la mariyayna, ugu danbaytii amiirkii kooxdu waxaa uu dil gawrac ku xukumay Warmooge iyo saddex dhalinyaro ah oo kale. Waxaana arooryo Jimcaha ah afar tiir oo is garab taagan lagu bireeyay Warmooge iyo saaxiibadiis. Waxaa ay ku dhawaaqayeen oo ay ku cataabeen ilaahoow adigaa awood lehe gacantan xaqdarada ah naga qabo. Erayadaasi waxa ay ahaayeen weedhihii ugu danbeeyay ee afka Warmooge ka soo baxay intii mindidii qadaadka lagaga jeexayay aysan hungurigiisa laba u kala jarin.
Mudo saacad ah ayaa ka soo wareegtay kolkii godkii Warmooge lagu awday laga dul dareeray. Waxaa uu Warmooge ku baraarugay laba nin oo xoog waaweyn oo dul fadhiya. Waxaa ay kula hadleen af qalaad oo uusan aqoon u lahayn. Waxaa uu yidhi, ma fahmi karo waxa aad leedihiin. Dabadeedna waxaa ay bilaabeen in ay sabarado iyo dube madaxa kaga garaacaan jeer ay maskaxdiisa bururiyeen. Waxaana ay ku qabteen dab iyo gaas waxaana isaga oo nool uu gubanayay mudo qarniyo ah.
Waxaa uu mar labaad soo baraarugay isaga oo hortaagan ruux ku fadhiya kursi oo awood badni ka muuqato.
Warmooge: kuma ayaad tahay?
Ilaahay: Waxaan ahay ilaahay, waxaan ahay boqorka boqorrada.
Warmooge: Muxuu arinkaagu yahay? Maxaa meeshan la ii kaanay? Maxaadse iga damacsan tahay?
Ilaahay: Weligaa ma tukatay?
Warmooge: maalinkii aabahay la xabaalayay iyo maalinkii hooyaday la xabaalayay ayaan tukaday.
Ilaahay: (isagoo cadho ka muuqato ayuu kursigii uu ku tiirsanaa hore uga soo ruqaansaday) Salaad xabaaleed kuma aanan weydiin e, faral weligaa ma tukatay?
Warmooge: Maxay tahay sababta aan u tukan lahaa?
(Laba ilaaladii ilaahay ka mid ah ayaa warmahooda dhulka ku garaacay si ay Warmooge u cabsi geliyaan una dareensiiyaan inuu la yimid weydiin aan haboonayn)
Taliyaha ilaalada Ilaahay: weedhaha afkaaga ka soo baxaya ka fiirso, si taxadar ku jiro na u hadal.
Ilaahay: Sababta aad u tukan lahayd waa in aad mahadcelin ka bixin lahayd wixii aad kuugu deeqay.
Warmooge: Maxaa ka mid ah waxyaabahaa ay ahayd inaan kaaga mahadceliyo? Dilka aabahay iyo walaalahay? Cudurka hooyaday dilay? Macaluushii ay walaashay u dhimatay? Mise gawricii labada dhegood la iigu simay? Markii hortaada la i keenay ee aad isu kay sheegtay in aad Ilaah tahay, waxaa aan jiiday neef rejo iyo niyaayiro ay ku ladhan yihiin. Waxaan filayay inaad ii sharixi doonto noloshii qadhaadhayd ee aan la kulmay sidoo kale aad iiga aari doonto kuwii aniga iyo qoyskayga na dulmiyay ee xanuunka geerida na dhadhansiiyay? Aaway daalimiintii dilka noo geysatay?
Ilaahay: (waxaa uu dig ka siiyay candhuuf weyn, waxaana uu laba jeer inta uu kacay dib ugu fadhiistay kursigiisii.) kuwii idin laayay waa ay toobad keeneen, oo khaatumada san ayay haleeleen denbiyadii ay galeena denbidhaaf ayay ka dalbadeen. Ha yeeshee, adiga iyo qoyskiina waxaa idin seegtay inaad khaatumada san ku dhimataan, oo waxa aad dhimateen idinka oo aan si hagaagsan u cibaadaysan.
Warmooge: Maxay ahayd sababtii aanu aniga iyo qoyskeygu silica ku mutaysanay?
Ilaahay: (waa uu yara qufacay, waxaa na uu safaystay cunaha xiix xiix uxu uxu) Een een… maxay ahaytoo, aaa een (mid ilaaladiisii ka mid ah ayaa afka dhegta u saaray oo la faqay) Haah! Haah! Een… een… sababtu waxaa ay ahayd waa aan idin imtixaamayay?
Warmooga: Oo imtixaankaa ujeedadiisu maxay ahayd? Maxaad uga gon lahayd?
Ilaahay: Een… xiiiix…xiiix…. khaakh.. tufu… ixi… (halkaa laabta ah ayuu gacantiisa bidix oo faruhu xidhan yihiin ku garaacay) iix… saaka dhuunta ayaaba i kala go’an…(mid ilaaladii ka mid ah ayaa koob biyo ah u dhiibay. Waxaa uu u qaldaamiyay
biyihii, sidii ruux todobaad oomanaa) een… waxaan uga dan lahaa, inaad garataan xigmadayda iyo awoodayda, dabadeedna aad ii mahadnaqdaan oo i weyneysaan. Arintaasu waxaa ay ahayd imtixaan aad ku fashilanteen.
Warmooge: (waa uu yaaban yahay, waxaa uu xoqay madaxiisa, dabadeedna waxaa uu calaacalihiisa saaray labadiisa dhaban) Oo si kale oo aad xigmadaada iyo weynidaada u muujiso ma weyday? Dhacdooyinka aniga iyo qoyskaygu aanu la kulanay waxa keli ah ee laga akhrisan karaa, waa inaad arxanlaawe aan jixinjixin tahay.
Ilaahay: (waxaa uu ka sarakacay fadhigii, wuxuu na dhankii Warmooge usoo laliyay koobkii uu biyaha ka heensaday. Indhihiisu waxaa ay isu rogeen casaan laga argagaxayo, waxaadna moodaa in cunuhu bararay, cadhada ka muuqata awgeed.) Qabta! Qabta… oo silsilado todobaadan dhudhun ah ku jebiya. Laba sabaradood oo dhamac ahna midna afka ka geliya midna duburta, dabadeedna si arxanla’aan ah inta aad u jiidaan cadaabta madax madax ugu tuura.
(Hadal kama danbayn!)
Maalinkaa ayaa Warmooge waxaa u bilawday cadaab abadi ah. Inta cimrigiisa ka dhiman waxaa lagu soli doonaa loxodka naareed. Waxaa lagu garaaci doonaa sabarado la cadeeyay; waxaana dhuuni looga dhigi doonaa malaxda iyo dheecaanka ka dhiiqa kuwa lala gubayo.
Sheekooy kunacay! Cakuye sheekadan daanyeertaba kama gadmeen sideee dadkayaga loogu shubtay? LA yaab maleh walaahoogii aynu ka dhaxalnay markaan qaadanay aragtidan Caabuqa ah ay Carabi inoo soo rartay.Waxaa waajib in jinkan aynu carab iskaga celino oo aynu ka run sheegeenii nolosha dib ugu laabano.
W/Q: Qoraa Dahsoon 5th July 2018